Ihe ọgụgụ dị n'azụ HDR + na Eserese Portrait nke Google Camera hapụrụ Google | Gam akporosis
Afọ ndị a gara aga Marc Levoy abụrụla onye na-akpata ihe osise ahụ site na ekwentị mkpanaaka emeela nnukwu nzọụkwụ site na Igwefoto Google ma ọ bụ igwefoto Google. Taa ọ hapụrụ ụlọ ọrụ.
Ma ọ bụ na ekele dịrị nwoke a ihe Pixels bụ enwe ike ịpụ na ekwentị ndị ọzọ njedebe dị elu maka oke ike ya na foto. Nke ahụ bụ, ọ nweela ike iji weta ihe Pixels kachasị mma na mpaghara a. Ọrụ Herculean.
Anyị agaghị ekwu na ọ bụ onye zuru oke, mana anyị ga-ekwu na otu n'ime akụkụ dị mkpa na-eduga mmepe nke HDR +, Ọnọdụ Eserese na Ọrụ Sight Night. Anyị na-ahapụ Onwe Esemokwu Ọnọdụ na taa enweghị onye na-abịakwute ya site na mkpanaka.
Ejirimara njirimara atọ a bụ Marc Levoy hapụrụ Google ugbua na Machị nke afọ a. Google goro ya na 2014 n'ihi na ọ bụ ọkachamara na nyocha foto. N'ezie, ọ buru ụzọ duzie ọrụ na Stanford nke mechara bụrụ Street Street na Google Maps. Dị ka ị nwere ike ịma ugbu a, anyị kachasị ihe ngwanrọ ngwanrọ n'ọhịa nke foto.
Ọpụpụ dị ịtụnanya nke Levoy si Google dị ka ọ bụ n'ihi echiche dịgasị iche iche banyere ọdịda ahịa nke Pixel 4 na nsogbu ndị ahụ o nwere na batrị. Mkpebi emere nke dugara n’igwe na batrị dara ogbenye, ebutegoro taa anyi na-asi si onye nghota Ha enwetala anya na algọridim na ngwanrọ karịa megapixels dị na igwefoto.
Anyị ga-ahụ ihe Pixel 5 nwere maka anyị mgbe nwoke a anọghịzi maka mmepe nke ikike ọhụrụ. N'ezie, anyị ga-enwe mmasị ịmara ebe ọ dara na ụlọ ọrụ ọ bụla, ebe ọ ga-enwerịrịrịrị atụmatụ na tebụl; n'oge anyị nwere HDR na igwefoto Google Go.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Marc Levoy, onye nwere ọgụgụ isi n'azụ njirimara igwefoto Google kachasị mma, hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ